Igbo Radio | Sports News in Igbo Language
Cisse bụ Kaptin ndị otu bọọlụ mba Senegal mgbe otu ahụ mere ọfụma n’asọmụpi iko mba ụwa nke e mere n’afọ 2002.
Cisse, onye nke dị afọ 38 ugbu a, ga-ewere ọkwa site n’aka nwoke onye mba Frans, Alain Giresse,
Onye ala Naịjirịa ụwa jiri egwu bọọlụ ụkwụ mara, bụ Daniel Amokachi, enwetego ọrụ dịka onye ọzụzụ otu egwuregwu bọọlụ a kpọrọ JS Hercules nke mba Finland. Amokachi kwesịrị ịmalite ọrụ dịka onye isi otu bọọlụ ahụ na-atụfughị oge.
Ụnyaa bụ Tuzdee abalị 18 nke ọnwa juunu, otu egwuregwu bọọlụ Super Eagles nke ala Nigeria na ndị ogbo ha si mba Tahiti zutere na Brazil na asọmụmpi bọọlụ ụkwụ nke Confederation Cup. Asọmụmpi iko eze egwu bọọlụ a na-aga n’ihu ugbu a na mba Brazil.
Onye na-elekwata otu egwuregwu bọọlụ ụkwụ Golden Eaglets nke ala Naịjiria, bụ Emmanuel Amunike, ekwuputego njikere ọ dị maka ịhazigharị otu ahụ. Amunike kwuru n’e kwesirị ihazigharị otu Golden Eaglets tupu a malite asọmụmpi egwuregwu bọọlụ FIFA maka ndị na-erubeghị afọ 17, nke a na-akwado inwe na mba Chile.
Ndị otu egwu-bọọlụ ụkwụ nke ala Nigeria, Super Eagles, etufuona ohere ọzọ ha nwetere iji gosi na ha so na ndị bụ ndị n’asọmpi bọọlụ iko mba Afrịka nke na-aga n’ihu ugbu a.
Nigeria hapụrụ Zambia ha saa otu ọkpụ goolu Nigeria buru ụzọ nwete site n’aka Emmanuel Emenike. Tupu Emenike akụta otu goolu ahụ, Obi Mikel riri otu penaliti, nke karụ ịbụ goolu izizi nye ndị Nigeria.